Iphepha leNcwadana No. 7 I-Festive Edition I-2018 - I-Foundation Foundation
Ikhaya Iphepha leNcwadana ye-7 ye-Festive Edition 2018
Iphepha leNcwadana ye-7 ye-Festive Edition 2018
Wamkelekile kuhlobo lwamva nje lweendaba ezinomvuzo. Sinamabali amaninzi kunye neendaba zakho. Ungazigcina usesikhathini ukutya kwe-Twitter rhoqo kunye neebhloko zeveki kwiphepha lasekhaya. Yonwabela iSikhumbuzo semilingo saseScott ngobusuku obushushu e-Edinburgh. Zonke iimpendulo zamkelekile kuMary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Kulo phephancwadi Iikholeji yaseRoyal of General Practitioners-iindibano zokusebenzela UMbutho WezeMpilo Wehlabathi uqonda i-Porn Harms Igalelo lethu loPhando I-autism, i-Porn and Sexual Offending YaseCambridge, eNgilani Frankfurt, Germany Virginia Beach, eU.SA Budapest, eHungary MSEBENZI E ZIKOLO INCEDO YABAZALI I-Award ye-CEO Ukubonakala kweMedia UJulie McCrone waseBrazil u-Alba wamisa i-shot neRuairdh Maclennan noMary Sharpe Iminqweno eshushu kakhulu yowama-2019
iindaba Iikholeji yaseRoyal of General Practitioners-iindibano zokusebenzela Kulo nyaka sagijima kwiindibano zocweyo ze-10 RCGP ezichaphazelekileyo kwiimpembelelo ze-intanethi kwimpilo yengqondo nangokwenyama kwi-UK nase-Ireland. Sasiba nabantu abahamba ngeenqwelo-moya ukusuka kwindawo ekude njengeFinland, Estonia, eBelfast naseNetherlands. Abathathi-nxaxheba baquka i-GPs, i-psychiatrists, i-psychologists, abafundi, abasebenzi abaselula, abasebenzi bezentlalo, ootitshala, abacebisi, amagqwetha kunye neengcali zecala.
Iqela le-TRF eGlasgow kunye noKatriin Kütt, utitshala wezesondo e-Eesti Tervishoiu Muuseum e-Estonia kunye nomqeqeshi wokubuyisela kwimeko yesiqhelo uMateyu Cichy waseBelfast Sivuyiswe ukusebenzisana kunye IZiko loLutsha kunye noBulungisa boBulungisa kwiworkshop yaseGlasgow kunye ne-firm firm Anderson Strathern kwi-Edinburgh enye. Kwakhona sinobudlelwane obuxhasa kakhulu INkonzo eNkonzo yoLuleko eNtshona eKillarney apho sizakubuyela ngoFebruwari ngenxa yemfuno ephezulu. Sikhuthazekile ngumdla, umdla kunye nomnqweno woomasifundisane abaninzi kwaye enye yazo iya kubandakanya iKork in the Spring. Ukuba ungathanda ukuba size kwingingqi yakho, nceda usazise kamsinya nje xa sikwinkqubo yokumisela imihla neendawo ezintsha zika-2019.
UDarryl noMary kunye noJoy O'Donoghue kunye no-Anna Marie O'Shea weZiko leNgcebiso le-SouthWest eKillarney UMbutho WezeMpilo Wehlabathi uqonda i-Porn Harms Ngomhla weJuni iMbutho YezeMpilo Yehlabathi (i-WHO) yaqaphela "ingxaki yokuziphatha ngokwesondo" (CSBD) ngokokuqala ngqa kwixesha elihlaziyiweyo leNgcaciso yeZizwe eziHlabathi (ICD-11). Bona yethu blog kuyo. Iphumelele kwikomiti yokukhetha yesayensi kunye neengcali zezokwelapha nangona kuchaswa ngokukrakra kumaqela anomdla axhunyiwe kwi-imboni ye-dollar yeebhiliyoni eziliqela ezibandakanya i-sexologists enqabe ukuba unobunono obuninzi obunokubakho bungozi.
Igalelo lethu loPhando IsiSeko soMvuzo asihlolisanga nje uphando olutsha malunga nemiphumo yezobuqhophololo imihla ngemihla, kodwa sinegalelo kulo kwaye senze ukuba kubekho kwiingcali ezifuna ukwazi. Kuloo nto iphetshana lethu lihlaziywe iphephalushwankathe uphando olwenziwe kwi-4th INgqungquthela Yomhlaba Yonke kwiZenzo zoLungiso (ICBA) yashicilelwa kwiphepha lolwazi Ukunyanzela ngokwesondo kunye nokunyanzelisa. Nantsi yethu blog kuyo. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba ungathanda ukufikelela kwiphepha elipheleleyo. Siyavuya ukumemezela ukuba iphepha elifanayo lisishwankathelo lwamaphepha olutsha olusuka ku-5 lonyakath Inkomfa ye-ICBA ithunyelwe kwaye iza kupapashwa, zonke zihamba kakuhle, ekuqaleni kwe2019. Siza kukuxelela xa.
I-autism, i-Porn and Sexual Offending Ubungozi bamadoda aselula kwi-autistic spectrum, ngokukodwa abo abane-Asperger's Syndrome esebenzayo, ukukhangela umlutha we-intanethi kuye kwathathwa ingqalelo. Xa umntu onolu hlobo lwesimo sengqondo esisuka ekuzalweni uye wabanjwa enecala lokufumana imifanekiso engcolileyo yabantwana, kuyacaca ukuba kukho ubuninzi bezinto ezingenakuthatyathwa kwinkqubo yezogwebo njengoko kuthatha aba bantu. Sibhale eziliqela blogs kwisifundo. Khangela apha kwakhona Ibali likaMama. Uhambo yiTRF YaseCambridge, eNgilani I-CEO yethu, uMary Sharpe, wahlonishwa ukuba athethe eLucy Cavendish College, eCambridge ngoJuni kulo nyaka kwisimemo soMongameli wakhe, uJackie Ashley. UMariya ungumlungu onxulumene naye. Isihloko I-Intanethi ye-Intanethi kunye neBraincent Brains Ihlala ixhomekeke kwinqanaba lexande kwaye liqinisekile, ikholeji yavuya kakhulu ngamalungu e-90 eyunivesithi kunye noluntu oluya kuzo. Yayinye yezona zihlwele ezinkulu kunazo zonke ekholeji yenkulumo kawonkewonke. Sasiyithanda isidlo seHolo esiHlangeneyo kwindawo yokudlela yaseKholeji apho uMary wayeyindwendwe yokuzukisa. Kwakunzima ukubuyela eCambridge.
Frankfurt, Germany Siyakholwa (njengoko kwenza ama-Amazon uluhlu lwabathengisi) ukuba incwadi kaGary Wilson Ubuchopho Bakho kwi-Porn - Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neNzululwazi ye-Addiction yincwadi ebhetele kwiimarike ezichaza imiba ejikeleze i-intanethi yeentengiso kunye nemiphumo yayo kwimpilo nobudlelwane. Ngamakhulu amabali okubuyisa kwaye achaze kakuhle isayensi, yenza ukuba isihloko sifumaneke kakhulu. Ukukunceda ekuphuculeni kwezinye iilwimi (esele iDatshi, isiArabhu nesiHungary, abanye baqhubeka) siye kwiForfurt Book Fair eJamani. Sadibana nabantu abaninzi abanomdla kunye nethemba lokuphuhlisa abo baqhagamshelwano kunyaka ozayo.
Virginia Beach, eU.SA Abafundi bavuyiswa ukuba babe ziithethi kwi UMbutho woPhuhliso lwezeNtlalo (SASH) kwinkomfa yonyaka ngo-Oktobha eVirginia Beach, eU.SA apho senze khona iqela ekufundiseni izicwangciso zethu zezifundo kunye neminye imisebenzi yemisebenzi yabasebenzi. UMary Sharpe, i-CEO yethu, ilungu leBhodi yabaLawuli balo mbutho kwaye ihlala isesikhathini kunye nophuhliso phakathi kwabaqeqeshi kule ntsi ngaphesheya kwechibi.
Budapest, eHungary I-TRF yavuya kakhulu ukumenywa eBudapest, eHungary ukuba ikhulume kwingqungquthela yamazwe ngamazwe ebanjwe yiSebe lezoBulungisa kunye ne-NGO ERGO ekuqaleni kukaDisemba. Iphepha likaMariya lalinomdla kwi-intanethi ye-intanethi ngokuthengiswa kwabantu kunye neendlela ezifanelekileyo zokujongana nazo. Kwakukho iintetho malunga nokuxhaphazwa ngokwesondo kunye nokuxhaphazwa kwabantwana baseParis naseWashington DC.
UDawn Hawkins kwiSizwe sikaZwelonke malunga nokuxhaphazwa ngokocansi eWashington DC
MSEBENZI E ZIKOLO I-TRF iyaqhubeka nokufundisa zizikolo kumacandelo azimeleyo nakarhulumente. Izicwangciso zethu zezifundo ezi-6 zikwinkqubo yokulinga kunye nokuphuculwa ngaphambi kokuba sizikhuphe ngexabiso elifanelekileyo ezikolweni ngo-2019. Umphathi wethu uzakube ethetha ngekhonkco phakathi kwamanyala nokuthumelelana imiyalezo nemiyalezo nemiyalezo ngefowuni kumnyhadala wePolisi nge-31 Januwari 2019.
INCEDO YABAZALI Nantsi blog, Isikhokelo sabazali kwi-Intanethi ye-Intanethi ngolwazi malunga nemithombo eninzi yamahhala. Ihlaziywa rhoqo ukuze ujonge rhoqo.
UMary Sharpe u-CEO wethu utyunjwe kwaye ukhethwe NatWest WISE100 ibhaso lomfazi ngomsebenzi wakhe kwintsimi entsha yokuphayona. Siyavuya kukuba umsebenzi wethu uqala ukuqatshelwa.
Ukubonakala kweMedia I-BBC (i-TV kunye neRadio), i-Daily Mail, i-Times, iLondon Evening News kunye nezinye iindawo ezivelele zibhale ngomsebenzi wethu. Bona yethu iphepha leendaba ezinye iinkcukacha. UMariya ufanele avele kwi-documentary kwi-BBC yaseSkotland malunga nabantwana kunye noonografi kunye ne-ALBA ye-BBC kwi-Spring.
UJulie McCrone waseBrazil u-Alba wamisa i-shot neRuairdh Maclennan noMary Sharpe Iminqweno eshushu kakhulu yowama-2019 Abasebenzi kunye nabahlobo beThe Reward Foundation banqwenela ukukunqwenelela okuhle kodwa ngo-2019. Nceda usilandele kwi-Twitter @brain_love_sex. Ukuba uyayazi nabani na ongathanda ukufunda ngakumbi malunga nefuthe lezonyango kwizempilo kunye nobudlelwane nceda uncoma Ubuchopho Bakho kwi-Porn - Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neNzululwazi ye-Addiction.
Iminqweno eshushu kakhulu yowama-2019 Abasebenzi kunye nabahlobo beThe Reward Foundation banqwenela ukukunqwenelela okuhle kodwa ngo-2019. Nceda usilandele kwi-Twitter @brain_love_sex. Ukuba uyayazi nabani na ongathanda ukufunda ngakumbi malunga nefuthe lezonyango kwizempilo kunye nobudlelwane nceda uncoma Ubuchopho Bakho kwi-Porn - Iimifanekiso zoononopasho ze-Intanethi kunye neNzululwazi ye-Addiction.
I-Copyright © 2019 I-Foundation Foundation, Wonke amalungelo agcinwe. Ufuna ukutshintsha indlela ofumana ngayo ezi meyile?